» २० वर्ष पुरानो गीतको रिमेकः बले र शिक्षाको अभिनय, कस्तो बन्यो ?
२० वर्ष पुरानो गीतको रिमेकः बले र शिक्षाको अभिनय, कस्तो बन्यो ?
२०७८ भाद्र २६,शनिबार १४:३०
काठमाडौँ । सागर लम्साल बले अभिनित नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। झण्डै २० बर्ष अगाडि रेकर्ड गरिएको प्रमोद निर्वाणको ‘किन यसरी’ बोलको गीत नयाँ भर्सनमा रेकर्ड गरी भिडियो सार्वजनिक भएको हो। गतिमा सागर लम्साल बले संगै शिक्षा संग्रौला, कुशल विष्ट र सन्जिता पाण्डे सानुको अभिनय रहेको छ।
पुराना गीतको रिमेकमा भिडियो निर्माण तथा अभिनय गर्नुको औचित्य प्रष्ट्याउदै सागर भन्छन्ः पुराना गीतले पुराना साथीभाईहरुको सम्झना दिलाउँछ। तिनै पुराना साथीहरुको सम्झनामा गीत फेरी रेकर्ड गराएर भिडियो बनाएको हो।
२० वर्ष पछि गीतमा गायक प्रमोद निर्वाणले केही नयाँ स्वाद र महिला स्वर पनि समावेश गरिएको छ। गीतमा सरला बीसीले साथ दिएकी छिन्।
गोल्डेन मड क्रिएशनको ‘किन यसरी’ लाई बले इटरटेन्मेन्टको यूट्यूब च्यानल बाट सार्बजनिक गरिएको गीतको भिडियोलाई दर्शकहरुले निकै रुचाएका छन्। आफ्ना पुराना दिनहरुको सम्झना दिलाएको भन्दै गीतको अडियो र भिडियो दुवै पक्षको प्रशंसा गरेका छन्।
केहि समय पहिले रिमेक गरी चर्चामा आएको गीत ‘तिम्रो मन बदलिएछ’ का निर्देशक निकेश खडकाको रहेको गीतको भिडियोमा प्रेममा हुने असमझदारी, दुर्घट्ना, पश्चातापलाई कलात्मक शैलीले प्रस्तुत गरिएको छ। बुद्ध थापाले खिचेको भिडियोलाई विकास धमलाले सम्पादन गरेका छन्।
जिल्लाहरु साक्षर भएको ४ वर्षसम्म प्रदेशमा घोषणा भएन
चौलागाईको ‘हासेकै छैन, म्युजिक भिडियो सार्वजनिक हुँदै
चर्चित गायक रुपक डोटेलको ‘लगी दे चरी’ बजारमा